Home News Jubbaland oo ka hadashay nabadoon lagu dilay Gobolka Gedo
Jubbaland oo ka hadashay nabadoon lagu dilay Gobolka Gedo
Maamulka Jubbaland ayaa Saacado kadib waxa ay ka hadleen dilkii xalay degmada Balad-xaawo ee gobolka Gedo Al-Shabaab ugu geysteen Nabadoon Dhaqane Qaasim Amiin oo kamid ahaa salaadiinta deegaanada
Madaxweyne kuxigeenka 1-aad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa marka hore guud ahaan dadka Soomaaliyeed sigaar ah dadka Jubbaland uga tacsiyeeyey geerida Nabadoonka.
Waxa uu sheegay in Al-shabaab ay isku dayeen in ay la wareegaan degmada Balad-xaawo,hayeeshe ay ka hortegeen Ciidanka Dowlad Goboleedka Jubbaland.
Dhaqane Qaasim Amiin ayaa kamid ahaa Waxgaradka Gobolka Gedo,waxaana sidoo kale uu ahaa Odayaashii ka qeyb qaatay dhismaha Dowlad-goboleedka Jubbaland sanadkii 2013-kii.
Previous articleFeysal Cali Waraabe oo si kulu ugu jawaabay Madaxweyne Biixi kana hadlay wadahadalada Soomaaliya iyo Somaliland
Next articleWasiirka Maaliyadda Miyuusan garan Mas’uuliyadiisa Misa waa u Talagal inuu Beenalayaal ku Tilmaamo Guddiga Maaliyadda.
Faah-faahin: Dad shacab ah oo lagu laayay Gobolka Sh-Hoose